Dean Unglert နှင့် Caelynn Miller-Key တို့သည် 'အိမ်တွင်းမိတ်ဖက်' ဟောပြောချက် - သတင်း
လိင်ကိုချစ်တယ် Gynaec ပြည်တွင်း ဒိုင် နိုင်ငံတကာ အောင်မြင်သူ အစားအသောက် အသိပညာ & ပညာရေး သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု နည်းပညာ
ဒင်း Unglert လက်ထပ်မဟုတ် - သူသည် Caelynn Miller က - ကီးနှင့်အတူပြည်တွင်းမိတ်ဖက်အတွက်ပါပဲ
သငျသညျသူတို့ကို Bachelor Nation တွင်စွန့်စားမှုအများဆုံးသောစုံတွဲအဖြစ်သင်သိသည်။ ယခု Dean Unglert နှင့် Caelynn Miller-Key ၏ဆက်ဆံရေးအခြေအနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကစေ့စပ်ထားခြင်းမဟုတ်၊ လက်ထပ်ထားခြင်းလည်းမဟုတ်၊
၏နောက်ဆုံးညဥ့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် The Bachelor - အကြီးမြတ်ဆုံးရာသီများ - အစဉ်အဆက်! လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကောလဟာလများကိုလက်ထပ်လက်စွပ်များတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သော လက်ချောင်း။ Unglert သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား sans စာရွက်စာတမ်းများမှကျူးလွန်နေထုတ်ဖော်, ထိုအတင်းအဖျင်းရှင်းလင်း။
ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်ငါဟာလူတစ်ယောက်ကိုကတိကဝတ်ပြုမိကြောင်းကမ္ဘာကိုပြသဖို့ခင်ပွန်းခေါင်းစဉ်မလိုအပ်ဘူးလို့သူကရှင်းပြတယ်။ ငါလက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကငါ Caelynn နဲ့ Caelynn ကိုသာကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာပြနေတယ်၊ ​​ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်ကတည်းကဝတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူမသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသို့မဟုတ်စေ့စပ်လက်စွပ်၏ရိုးရာလက်စွပ်မဟုတ်သော၊ သူမ၏ပျော်စရာကောင်းသောလက်စွပ်ကို ၀ တ်ဆင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သစ္စာရှိကြောင်းပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးကောလာဟလများသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Miller-Keyes သည် Instagram ကို Unglert မှတင်ပြပြီးကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ ပရဒိသုဘွဲ့ Yosemite အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိကျောက်တုံးပေါ်တွင်ကြယ်ပွင့်ပေါ်တွင်သူကိုယ်တိုင်နှင့် Unglert ၏ဓာတ်ပုံများကိုဆလိုက်ရှိုးပြသသည်။
သူမရိုက်ကူးထားတဲ့စာတန်းကိုသူကထိုးဖောက် ၀ င်လာတဲ့သူမတောင်မှဒီကောင်လေးကိုစူးစမ်းလေ့လာတာကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ (FYI: အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Unglert ကဒီဇင်ဘာလနှင်းလျှောစီးမတော်တဆမှုတစ်ခုမှာသူ့ပေါင်ပေါ်ပေါက်သွားတယ်။ )
Caelynn Miller-Key (@caelynnmillerkeyes) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 6:56 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 2020 တွင်
သူမသည်လက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်မခံခဲ့ရခြင်းနှင့်သူတို့စေ့စပ်နေတယ်လို့ထင်ကြေးမှပရိတ်သတ်များကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုဓာတ်ပုံများအတွက်ဘာမျှရှိပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှု update ကိုအမှန်တကယ် comment Miller မှ Miller-Keyes မှဖြောင့်ရောက်လာတယ်။
သူမ၏နောက်လိုက် @ heather_xo88 ကသူအဆိုပြုရန်လိုအပ်သည်ဟုမှတ်ချက်ချသောအခါ BiP ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကသူသည်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ?!
Miller-Keyes သည်ဤအဓိကမှတ်တိုင်ကြေငြာချက်ကိုစာတန်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများဖြင့်မပြောဘဲသူမ၏မှတ်ချက်များကဏ္inတွင်ဘာကြောင့်မတော်တဆပစ်ပယ်ခဲ့တာလဲ။ ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့် Unglert kinda sorta သူများအတွက်ပရိုမိုကာလအတွင်း Miller-Keyes မှကျူးလွန်ရဲ့အတည်ပြု ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Ashley Iaconetti နှင့် Jared Haibon တို့နှင့်အတူ Kumail Nanjiani၊ Issa Rae နှင့် Bachelor Nation alums နှင့်အတူရုပ်ရှင်။
@kumailn မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 9:11 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 18, 2020 ရက်တွင်
သငျသညျအထကျအထက် Nanjiani ရဲ့ post ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့, Haibon လက်ထပ်အဖြစ် Unglert ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်သွားအမှုအရာရရှိသွားတဲ့။ ကျန်အဖွဲ့အနေဖြင့်လိုက်လျောညီထွေစွာတုန့်ပြန်ပြီးသူတကယ်ချည်နှောင်ထားသလားဟုမေးသည်။ Unglert သည်နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသော်လည်း Haibon သည်သူနှင့်သူနှင့်သူ၏ခြေထောက်ကျိုးပဲ့နေစေရန်သူမထိုသို့ပျံသန်းပြီးနောက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Miller-Keyes နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်ဟု Haibon ကွက်လပ်တွင်ဖြည့်ထားသည်။ Unglert ကတိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူး၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဖြတ်တောက်လိုက်တယ်။ ငါ့ဇနီးနဲ့လက်ထပ်တာဟာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်မလက်ထပ်ထိမ်းမြား, ငါတို့က Miller-Keyes သူ၏ဇနီးခေါ်ဆိုဘို့ Unglert အပြစ်တင်ကြပါဘူး။ သို့တိုင်မေးခွန်းတစ်ခုကျန်ရှိနေသေးသည်။ Unglert ကကန ဦး ကွင်းဆက်တွင် Neil Lane အားစာရင်းသွင်းခဲ့သလား။
သက်ဆိုင်သော: ခရစ် Harrison သည် Bachelorette Kaitlyn Bristowe အတွက်အံ့သြစရာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်
Categories Gynaec အစားအသောက် စိတ်ကျန်းမာရေး